Isevisi Yokwehlisa, Ukuthola Umkhiqizo, Intengo Yezitolo - Nextschain
Isevisi ye-dropshipping ehamba phambili nokugcwalisa
Izixazululo ze-All-in-one Dropshipping ukukusiza ukuthi wonge isikhathi esiningi futhi uthole inzuzo ephezulu
100% Ivikelekile futhi Yamahhala.Alikho Ikhadi Lesikweletu elidingekayo.
I-NextsChain iyisixazululo sokumisa esisodwa se-ecommerce.Sihlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi enhle ethengiswayo, ukugcwaliseka kwama-oda, ukulandelela amaphakheji nokwenza ngendlela oyifisayo ukupakishwa nokufakwa kwebhrendi njll. Akudingekile ukuthi ukhathazeke ngempahla, isikhathi eside sokuthumela noma i-akhawunti yakho ye-Aliexpress ivinjiwe.
Siyakwazi ukuhlinzeka ngensizakalo yokugcwalisa yobungcweti e-China.Ungashintsha i-Aliexpess, i-Alibaba ne-taobao oda ukuze ugcwalise nge-NextChain.sizokusiza ukuthi uphathe ama-oda akho kanye nokugcwaliseka kwe-inventory, sikunikeze isisombululo esingcono kakhulu sokugcwalisa.
Enza ngendlela oyifisayo Ukupakisha & Ukubhrenda
I-NextsChain ikusiza ukuthi wenze ngokwezifiso ilogo yomkhiqizo wakho emabhokisini okupakisha, izikhwama kanye namaTapes.Futhi sisekela ukwenziwa ngokwezifiso kwe-OEM ne-ODM kwelogo yomkhiqizo wakho ezintweni zakho ze-oda.
Yini eyenza Sihluke
Izigidi zemikhiqizo engcono
Amaklayenti azoba nabahlinzeki bempahla abahlukahlukene abaphezulu futhi akhethe eningini lemikhiqizo engaphezu kuka-500,000 ngentengo yesamba.I-NextsChian iphinde ihlinzeke ngemikhiqizo Ewinile kanye nemikhiqizo Ethrendayo ukusiza abathengisi bethu baqhube ibhizinisi labo lokwehlisa ngempumelelo.
Buck Hlela Support
I-NextsChain inikezela ngethuluzi lokuhlela le-Buck elingcono nelingcono nelilula ukukuvumela ukuthi uphathe ukufakwa kuhlu kwemikhiqizo yakho kahle ngesikhathi esincane.Ungaba nesikhathi esengeziwe sokunaka ibhizinisi lakho lokumaketha kanye namanye amabhizinisi okuthengisa.
I-NextChain ikuvumela ukuthi ufake ama-oda angu-100 ngemizuzu, ngokushesha kunanoma imaphi amanye amathuluzi!Yonga isikhathi futhi uthole ukusebenza kahle nozakwethu we-AliExpress dropship!
Phakade Free Plan
Sihlinzeka ngohlelo lwamahhala lwaphakade
I-NextChain App enomklamo omuhle osabelayo, sebenza kahle ne-smartphone yakho, iThebula noma i-PC compuer.ungaphatha ibhizinisi lakho le-dropshipping nganoma yisiphi isikhathi nanoma kuphi.
I-oda Ukugcwaliseka Okuzenzakalelayo
Ukuthumela Okusheshayo & Kwamahhala
Kuthatha cishe izinsuku zebhizinisi ezi-5 - 8 ukufika e-US, izinsuku ezi-3-8 ukuya e-Japan, Korea, Singapore, Malaysia.Futhi cishe izinsuku ezi-4 - 10 ukufika eCanada, Australia, Mexico, noma amazwe e-EUR.
Uma wenza ibhizinisi lokudonsa nge-oberlo ngaphambili.asikwazi nje ukukusiza ukuthi unciphise isikhathi sokulethwa kanye nokupakisha ngokwezifiso & ukufaka uphawu lwemikhiqizo yakho, kodwa futhi sikusize ukuthi ungenise imikhiqizo isuka ku-oberlo iye ku-NextsChain ngemikhiqizo exhumanisa ngokuchofoza okumbalwa esikhundleni sokukopisha ngakunye ngakunye.
Ukulandelela Iphakheji & Phatha
Ngesistimu yethu yokulandelela iphakheji ye-Intelligent, i-NextChain ikuvumela ukuthi uphathe iphakheji yakho kahle, ungathola kalula ukuthi iphakheji yakho izolethwa nini nokuthi izolethwa nini.Ukuze ugweme izikhalazo eziningi zamakhasimende futhi wonge isikhathi esiningi.
Inventory Auto & Price Phatha
Izinsizakalo zokuphatha izinto zesikhathi sangempela, kanye nokubuyekezwa Kwamanani Okuzenzakalelayo kanye nesaziso ngomthetho.Kuyindlela ehlukile ye-AliExpress.
Sihlanganisa nalezi zinkundla ze-ecommerce nezimakethe
Sihlinzeka500,000+imikhiqizo engcono ngentengo ye-wholesale
Yeka ukumosha imali emikhiqizweni emibi, i-NextChain ihlinzeka ngemikhiqizo eminingi ewinayo enenzuzo ukuze ithengiswe.
ikhaya & ingadi
Izingane & Amathoyizi
Izimoto & Izithuthuthu
Izibani & Ukukhanyisa
Lolu hlelo lokusebenza luwushintsho lwegeyimu imikhiqizo emihle kakhulu izikhathi ezinhle zokuthumela kanye negumbi lezintengo ezinhle ukwenza inzuzo abameleli benkonzo yamakhasimende bangcono kakhulu engake ngabhekana nabo ngihlangabezane nenkinga futhi yalungiswa phakathi nesikhathi esiphusile ngosuku olufanayo.Uhlelo lokusebenza oluhle.Izinto eziningi zithunyelwa mahhala
Amabhendi we-Vegan Apple Watch
Ngikhethe lolu hlelo lokusebenza ngoba bengifuna ukunikeza amakhasimende ukuthunyelwa okusheshayo okuya e-UK (futhi okungenzeka emhlabeni wonke, ekugcineni) njengoba isikhathi sokuthumela sezinsuku ezingama-20-40 esivela kwabanye abahlinzeki sisikhulu kakhulu.Ngine-niche ethile yomkhiqizo, ngakho-ke bengikhathazekile ukuthi izinketho zami zizonqunyelwa, kepha kunemithwalo.Nginemikhiqizo engaphezu kuka-160 elinde ukungeniswa, futhi yonke ibukeka iyinhle.Amagama omkhiqizo mahle futhi acocekile, amanani entengo afanelekile ngokwehla njll. Angikatholi i-oda ngawo (IR...
Ngibe nalolu hlelo lokusebenza okungenani izinyanga ezi-2 ngaphambi kokubhala lesi sibuyekezo.Kuzibuyekezo eziningi ezinikezwe ngosuku olungu-1 lokusebenzisa.Lolu uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu.Ngigcwalise isampula ye-oda elithunyelwe ngokuqondile ngesikhathi njengoba kushiwo.Ngingenise okungenani imikhiqizo eyi-150 ngempumelelo.Ngithinte abosekelo okungenani izikhathi ezi-5 ngempendulo efike ngesikhathi kakhulu isikhathi ngasinye.Ngingancoma kakhulu lolu hlelo lokusebenza kunoma ubani.Siyabonga kakhulu NextsChain!ngengeza kulokhu kubuyekezwa.Ngifuna ukwazisa wonke umuntu ngesipiliyoni sami sangempela nge-Ne...
I-OM Fashion Boutique
Ngijabule kakhulu nge-Nextschain.imikhiqizo eminingi ongakhetha kuyo kanye nesevisi yezingubo ezinhle.Ngaba nezinkinga futhi bangisiza ngaso leso sikhathi futhi bangilungisela yona.ngiyabonga kakhulu NextsChain.
Umthandi wewayini nekhofi
Sekunezinyanga ngisebenzisa lolu hlelo lokusebenza futhi manje sekuwukungena kwami ​​​​kuhlelo lokusebenza lwesitolo sami.Ngithole imikhiqizo lapha engingayitholi kwezinye izinhlelo zokusebenza zokugcwalisa.Angifuni ukusebenzisa i-oberlo futhi ngisebenzise i-aliexpress ngoba izikhathi zokuthumela ziyingozi futhi kufanele ubhekane nabathengisi abahlukene abayisigidi.I-Nextschain inakekela yonke into.Uthola i-oda bese ukhokha i-wholesale futhi bayapakisha futhi bathumele umkhiqizo futhi bathumele i-imeyili yokuqinisekisa umkhumbi.Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga zibuyela kuwe futhi ...
Hhayi-ke uma ufuna ukuqala ukwehlisa le 2020 ungabheki nxazonke usendaweni efanele, i-Nextchain inokwesekwa nawo wonke amathuluzi akho okuphumelela uma unobunzima izinsizakalo zabo zamakhasimende zingokuchofoza okumbalwa nje ukukusiza. wena futhi uxazulule futhi ulungise inkinga yakho.I-Nextchain iyisivumelwano.
Isevisi Yokuthumela Ngemikhumbi Enhle Ngokumangalisayo.Ingcono kakhulu kunazo zonke izinhlelo zokusebenza zokuthola nokuthumela engizisebenzisile.Siyabonga ngemisebenzi emihle nokwenza i-dropshipping ibe ngcono.
I-Pooch Friendly Supply
Okokuqala, ngithole lo mkhiqizo ngokungahleliwe futhi angikwazanga ukujabula kakhulu ngokuthi ngijabule!uma ngisheshe ngahlangana nalokhu, bekuzongisindisa isikhathi esiningi.Ibanga lomkhiqizo wabo likhulu, banikeza itheyiphu yokuthumela engokwezifiso namabhokisi ukuze akusize wakhe uhlobo lwakho lomkhiqizo, njll. Uhlelo lwabo lwamahhala lunikeza abahambisi abaqalayo abawa phansi uhlelo ELIHLE lapho ungangeza khona imikhiqizo engu-1,000!Isikhathi sokuthumela e-US cishe izinsuku ezingu-5-9, okuyinto enhle ngempela uma iqhathaniswa ne-Aliexpress nezinye izinkampani.Ngithole ithuba lokusebenzisa...
Ngimusha kuma-oda okuthumela esitolo sami.I-NextsChain inyukile njengesevisi yokuthumela ngokushesha.Njengoba ngangingaqiniseki ukuthi ngenzeni, ngasebenzisa ibhokisi lengxoxo ukuze ngixoxe nomsizi onobungane nonolwazi owangichazela insizakalo.Ngaqinisekiswa ukuthi ukuthunyelwa kuyashesha nangokucophelela.I-Nextschain isivele inemininingwane yomkhiqizo wami engilungele.Ngiyakwazisa ukunaka okukhethekile abakunikeza imininingwane, okungongela isikhathi.Martinez
Faka i-NextChain App
Faka uhlelo lokusebenza lwe-NextChain esitolo sakho se-shopify.
Faka ama-oda ngokuchofoza oku-1 bese ukhokhela abahlinzeki be-Nextschain.
Faka ama-oda futhi ukhokhele kubahlinzeki be-Nextschain.
Ukuthumela ama-oda kumakhasimende akho kusuka ku-Nextchain store ngqo.